‘मेरो जीवन सकिएको छैन’ - समसामयिक - नेपाल
‘मेरो जीवन सकिएको छैन’
अस्पतालमा मुस्कान खातुन
सबेरै ५ बजे उठिन्, नुहाइन्, नमाज पढिन्, खाजा खाइन्, ड्रेस लगाइन् र झोला भिरेर घरबाट निस्किन् ।
वीरगन्ज छपकैया-२ की मुस्कान खातुनलाई स्कुल पुग्न हतार थियो, २० भदौमा । तर आधी बाटोमै उनको यात्रा रोकियो । स्कुल होइन, अस्पताल पुगिन् । कीर्तिपुरस्थित बर्न मोडल अस्पतालमा ४२ रात बिताइसकिन् । चिकित्सक भन्दै छन्, अझ एक-डेढ महिना अस्पतालमै बस्नुपर्छ ।
२९ असोजमा शैय्याबाट मुस्कानले नेपालसँग भनिन्, "तर मलाई जति छिटो स्कुल जान मन छ ।"
१४ वर्षकी मुस्कान ९ कक्षामा अध्ययनरत छिन् । नामजस्तै हरदम मुस्कुराउँथिन् तर अहिले खुलेर हाँस्न सक्दिनन्, अचाक्ली पीडा हुन्छ । अनुहारको दायाँ भाग पूरै डढेको छ, दुवै हातको हालत उस्तै । फूलजस्तै कोमल मुस्कानको शरीरमा एसिड जो प्रहार भयो ।
उनले एसिडको नाम सुनेकी थिइन् तर यसले आफ्नै जीवन बर्बाद पार्ने अहँ ! कल्पनै थिएन । मान्छेलाई हानिन्छ भन्ने पनि हेक्का थिएन । न उनको कुनै गल्ती, न त दुर्घटना । तर यत्तिका दिन असीमित शारीरिक दुखाइ र मानसिक छटपटी । अझ कत्ति बाँकी छ !
एसिड प्रहारको त्यो आततायी क्षण सम्झँदा मुस्कानका आँखामा आँसु होइन, आक्रोश भरिन्छ ।
स्कुल पुग्न केही मिनेट बाँकी थियो, अलि अघि र पछि साथीहरू थिए, बीचमा मुस्कान एक्लै थिइन् । बाटो छेउ उनलाई ढुकिरहेका रहेछन्, सम्साद आलम । मुस्कानलाई मन पराउँछु भन्दै जिस्काएर दुःख दिने माजिद मियाका लंगौटिया थिए, सम्साद । त्यसैले उनलाई देख्नासाथ मुस्कानको ढुकढुकी हल्का बढ्यो, तैपनि नदेखेझैँ फटाफट हिँडिरहिन् । सम्सादले जिस्काउँदै सोधे, 'कता हिँडेकी ?' यसो हेरिन्, एउटा हातमा ढुंगा थियो, अर्को हातमा सिसाको जग ।
डर बढ्यो तर नडराए जसरी जवाफ दिइन्, 'ड्रेस देखेनौँ, स्कुल जान लाग्या नि ।' त्यसपछि सम्सादले 'लाउ पानी खाऊ' भन्दै जग थमाउन खोजे, मुस्कानले मानिनन् । चार पाइला अगाडि बढिसकेकी थिइन् । सम्सादले बोलाए, 'मुस्कान यता हेर त ।' उनी ठ्याक्क पछाडि फर्किन्, सम्सादले जगको तरल पदार्थ उनको अनुहारमा फालिहाले । त्यही बेला माजिदलाई पनि त्यहीँ देखिन् । उनी छेवैमा लुकेर बसेका रहेछन् ।
सम्सादले भनेजस्तो जगमा पानी नभई एसिड थियो । मुस्कानको उपचारमा दिनरात खटिरहेका बुबा रसुल अन्सारीका अनुसार एसिड खुवाएर र ढुंगाले हान्ने योजनामा थिए, सम्साद र माजिद । खान नमानेपछि माजिदकै इसारामा सम्सादले अनुहारमा हुत्याइदिए ।
भाग्यवश ! त्यसरी जग आफूतिर ताक्दा डराउँदै मुस्कानले दुई हातले अनुहार छोपिन्, त्यसैले एसिडले उनको अनुहार पूरै जलेन, आँखा पनि बच्यो, अनुहारको दायाँ भागदेखि छातीसम्म जल्यो । तर त्यतिबेला मुस्कानलाई एसिड हो भन्ने लागेन, भकभक उमालेको पानीजस्तो लाग्यो । किनभने एसिडले सुरुमै जलाइहाल्दैन, बिस्तारै जल्दै र दुखाइ बढ्दै जान्छ । एसिड हान्नासाथ उनीहरू भागिहाले, वरपर अरू मान्छे जम्मा भए, मुस्कानले बुबाको फोन नम्बर दिइन्, त्यसपछि बेहोस भइन् ।
होस आउँदा अस्पतालमा थिइन् । जलेका हात देखिन्, आँखामा आँसुका धारा बगिरहे, बुबाआमा सहनाज खातुन अन्सारीसँगै रोइरहेका थिए । सहनाजका अनुसार कैयौँ रात मुस्कान निदाउनै सकिनन्, रातभर रोइरहन्थिन्, दुखाइले चिच्याउँथिन्, बेडमा थाम्नै धौ-धौ पथ्र्यो । पेनकिलरले 'किल' गर्न नसकेको पीडा ! मानसिक रूपमा उस्तै विक्षिप्त । मुस्कान सुनाउँछिन्, "नमरे पनि मेरो जीवन सक्कियोजस्तो लाग्थ्यो, बाँच्नु बेकार ठान्थेँ । जे सम्झ्यो, त्यही अन्धकार लाग्थ्यो ।"
रुवाइमै बितिरहेका थिए दिनहरू । एक सातापछि फेरि एसिड हानेझैँ भयो, जब बाथरुमको ऐनामा आफ्नो अनुहार देखिन् । आधी जलेको अनुहार देख्दा आफैँसँग तर्सिन्, ऐना फुटेझैँ लागेछ । अनुहार नै यस्तो क्षतिविक्षत, किन बाँच्नु ! यस्तै-यस्तै सम्झँदै डाँको छाडेर रुन थालिन् ।
बल्ल-तल्ल आमाले बाथरुमबाट बेडसम्म ल्याइन्, मुस्कानले देखिन्, बुबा पनि रुँदै रहेछन् । नमीठो लाग्यो । बेडमा उत्तानो परेर माथितिर हेरिन्, सोचाइ शून्यमा झरिरहेको थियो, दुखाइबाट सकेसम्म उम्कन खोज्दै थिइन् । स्कुलमा पढेका कुरा सम्झिन् । सबै याद छ, गणितका सूत्रदेखि अंगेजीका व्याकरणसम्म । शिक्षक र साथीहरू आँखामा झल्झली नाचे ।
उनको मानसपटलमा एउटा जादूयी सोचाइ जन्मियो, 'मेरो अनुहारको आवरण पो जल्यो, दिमाग त जस्ताको तस्तै छ । मेरो जीवन सकिएको छैन । मज्जाले पढ्न सक्छु ।' मुस्कानले मुस्काराउँदै भनिन्, "त्यसपछि मैले कहिल्यै नरुने प्रण गरेँ, बुबाआमालाई पनि सम्झाएँ । आजकल पनि अति दुख्छ तर आँसु झार्दिनँ । बरु अहिले जति दुखेको छ, त्यो सबै बिर्सने गरी पछि पढ्छु भनेर आत्मबल बढाउँछु ।" मुस्कानले यसो भनिरहँदा छेवैका आमाबुबाको मुहारमा मुस्कान नाच्यो । सहनाजले सुनाइन्, "आजकल म पनि रुन छोड्या छु ।"
मुस्कानलाई लाग्छ, त्यो प्रण उनका लागि दोस्रो जन्म हो ।
मुस्कानको शैय्या नजिकै औषधी मात्र छैनन्, किताबहरू पनि छन् । पाकिस्तानमा तालिवानको आक्रमणमा परेकी मलाला युसुफको आत्मकथा आई एम मलाला, झमक घिमिरेको जीवन काँडा कि फूल, हेनरी केल्लरको द स्टोरी अफ माई लाइफ आदि-इत्यादि । चिकित्सकले उपहार दिएको आई एम मलालाले उनलाई औषधीकै काम गर्‍यो । जति पनि पुस्तक पढ्दै जान्छिन्, आत्मबल चुलिँदै जान्छ ।निश्चिन्त हुन्छिन्, बेडबाट उठेर मैले पुराना-नयाँ सपना पूरा गर्छु र गर्नुपर्छ । उनलाई जीवनप्रति प्रेम जगाउने अरू कारण पनि छन् ।
उनलाई पहिले लागेको थियो, एसिडपीडित पहिलो केटी मै हुँ । तर केही दिनअघि सीमा बस्नेत, जेनी खड्का र संगीता मगर अस्पताल पुगे, जो उनीजस्तै एसिडबाट डढेका थिए । शरीर जले पनि उनीहरूको मन जलेको थिएन, साहस मरेको थिएन । उनीहरूले मुस्कानलाई आफ्नो भोगाइ सुनाए, आँट र अठोट साटे, जीवनप्रतिको मोह पोखे, मुस्कानको मन थप हल्का भयो ।
मुस्कानलाई अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, बरुण धवन, कृति सानोनजस्ता बलिउड स्टारले भिडियो सन्देश पठाए । राजेश हमाल, पारस खड्का, सञ्चिता लुइँटेल, नीति शाह, शृंखला खतिवडालगायतका सेलिबि्रटीले भेटेर उनमा मुस्कान थपे । उनलाई मन पर्ने गायक राजु लामाले बेडमा सँगै बसेर गीत गाए । दैनिक कैयौँ अपरिचित अनुहारहरू स्वास्थ्यलाभको कामना गर्दै अस्पताल पुग्छन् । मुस्कानले मधुर स्वरमा भनिन्, "शरीर दुःखे पनि संसार मेरो साथमा छ । यो पनि उपचारजस्तै हुने रहेछ ।"
डेढ महिना पढाइ छुटिसक्यो, अझ त्यति नै समय स्कुल जान सक्दिनन् । ९ कक्षाको फाइनल परीक्षा दिन मुस्किल छ । छोरीलाई प्रेसर नहोस् भनेरै आमाको चाह छ, यो वर्ष 'ग्याप' गर्ने, अर्को वर्ष पढ्ने । आमाको यो कुरा उनलाई मन परेनछ । हामीतिर फर्केर भनिन्, "होइन, अर्को वर्ष त एसईई दिने हो । ९ कक्षा यही साल पास गर्छु ।"
योजना पनि सुनाइहालिन्, बिस्तारै दिमाग एकाग्र हुँदै छ, त्यसैले अब अस्पतालमै पढ्न थाल्ने, डिस्चार्ज भएर घर गएपछि अझ बढी पढ्ने, अरू साथीहरूसँगै परीक्षा दिने । जब स्कुल र पढाइको कुरा हुन्थ्यो, उनका आँखा उज्यालिन्थे । काटिएको कानको दुखाइ झेल्दै भए पनि मुस्कुराउन खोज्थिन् । लाग्थ्यो, उनको भौतिक शरीर मात्र शैय्यामा लमतन्न छ, मन त स्कुलमा साथीसँगै पढ्दै र खेल्दै छ ।
मेधावी मुस्कानको जीवनको लक्ष्य थियो, डाक्टर बन्ने । यो घटनाले लक्ष्य, जिम्मेवारी थपेको छ, डाक्टर त बन्ने नै, समाजसेवा पनि गर्ने, हिंसापीडितलाई सक्षम बनाउने अभियान चलाउने । दृढतासाथ भनिन्, "यति त गर्छु-गर्छु ।"
ट्याग: समाजएसिड आक्रमणमुस्कान खातुन